ब्लग – Page3– Saurahaonline.com
हाम्रो ‘यौन’ जीवन कति उदार छ ? २०७६, २ कार्तिक शनिबार
बसन्तकुमार उपाध्याय : कुनै पनि मानिस जीवनमा एकपटक यो अवस्थाबाट पक्कै गुज्रिएको हुन्छ–उसलाई पहिलो ‘सेक्स पार्टनर’ जोसुकै भए पनि फरक पर्दैन। पहिलो यौन अनुभवका लागि बिछ्यौना तताउन मात्र पाए पुग्छ। यौनानन्दका..
एनआरएनए चुनावमा गौरीराज जोशीको भन्छन् : राजनीतिक अधिकारसहितको नागरिकता र लगानी २०७६, २८ आश्विन मंगलवार
हामी गैरआवासीय नेपाली संघ विश्व सम्मेलनको लगभग संघारमा आइपुगेका छौँ । करिब ५० लाख नेपाली विदेशमा बस्दै आएको भएरमात्र होइन नेपाली अर्थतन्त्रको विदेशमा रहेका नेपालीले पठाएको रेमिट्यान्समा बढ्दो निर्भरताले पनि यो सम्मेलनको महत्त्व सिद्ध हुन्छ..
देशमा हराएकी रक्षा २०७६, ६ आश्विन सोमबार
ईश्वर गिरी रक्षा ! आमा बाबाको काखमा लुटुपुटु गर्ने, हाँस्ने, खेल्ने र उफ्रदै रमाउने, विद्यालयबाट घरको आँगन नपुग्दै झोला फाल्दै आमा भोक लाग्यो भनेर आमालाई सताउने उमेरमा छिन् । धनी परिवारमा नजन्मेका कारण त्यो सुविधा रक्षालाई रहेन । प्रत्येक दिन..
डेंगुको महामारी– सरकार किन मुकदर्शक ? २०७६, १२ भाद्र बिहीबार
गोपीराम स्याङ्तान केही साता यता विभिन्न संचार मध्यममा डेंगु अनियन्त्रित रुपमा देशव्यापी फैलिरहेको समाचार आइरहेका छन् । प्रत्येक वर्ष मनसुनको समयमा देखा पर्ने यो रोगले यसपटक भने महामारीकै रुप लिइरहेको छ। वैशाखदेखि भदाै महिनासम्म ४२ भन्दा..
पुडासैनी प्रकरण र वृद्धिजीवि प्रेमको भनाई : अपराधी छुट्न हुन्न, निरपराधले दण्ड पाउन हुन्न ! २०७६, ५ भाद्र बिहीबार
चितवन : पत्रकार शालिकराम पुडासैनीको आत्महत्या प्रकरणले तानिएका चर्चीत पत्रकार रवि लामिछाने पक्राउपरेपछि चितवनको माहोल तातेको छ । धेरैको यसको निष्पक्ष छानविनको माग छ । यहि क्रममा नेपाल राष्ट्रिय बुद्धिजीवी सङ्गठन, चितवनका अध्यक्ष प्रेमराज..
मिसकलले जुराएको प्रेम विवाह ! २०७६, २ भाद्र सोमबार
- ईश्वर गिरी समिना भर्खर कक्षा १० मा पढ्दै छिन् । उनको बुवा बाग्लुङ्गको गाउँमा खेती–किसानी गरेर बस्नुहुन्छ । परिवारमा उनी, उनको विवाहित दिदी र दुई भाइ गरी जम्मा छ जनाको परिवार छ । खेती–किसानीमा बाबु आमालाई साथ दिनु, घरमा सामान्य कामकाज..
दुर्व्यसनको दलदलमा भासिएका एक डाक्टरको ‘रिह्याव’ यात्रा २०७६, २१ असार शनिबार
काठमाण्डौं, २१ असार । सेतो एप्रोन अनि काँधमा स्टेथेस्कोप भिरेर बिरामीको उचार गर्ने सपना कुन चाहिँ डाक्टरको हुँदैन हाला ररु यस्तै सपना सुनिल केसी ९नाम परिर्वतन० को पनि थियो। सुनिलले १२ कक्षाको परीक्षा दिए। परीक्षा सकिने बित्तिकै उनका..
प्रकाश सपुतको शम्भु राइलाई चिठी २०७६, ५ असार बिहीबार
काठमाडौं । आदरणीय शम्भु राई सर नमस्कार । आराम छु आराम चाहान्छु । आज मिति २०७६ असार ३ गते रातको ठिक १२ बजेर ५३ मिनेट जादै गर्दा बुटवल फर्साटिकटमा रहेको रिद्धीसिद्धी पार्टी प्यालेसको पहिलो तलाको बीचको कोठामा पल्टिएर मोबाइलको नोटबुकमा यो..
बद्लिन चाहे सम्भव छ २०७६, ३२ जेष्ठ शनिबार
काठमाण्डौं, ३१ जेठ । कुनै व्यक्तिले चोरी गर्‍यो । ऊ चोर कहलिन्छ । चोर आफैमा तृच्छ र घृणित कृत्य । चोरलाई कसैले सम्मान गर्दैन घृणा नै गर्छ । उनले किन चोर्‍यो रु उनको नियत बिग्रिएर । खराब संगतले उक्साएर । परिस्थिती वा परिबन्ध परेर । आखिर जे होस् चोरी..